शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीसामु अवसरसँगै मुख्य पाँच चुनौती| Nepal Pati
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभाका तीनचौथाई सांसदको समर्थन पाएका छन् । १८४ मत हुँदा दुई तिहाई पुग्नेमा ओलीको पक्षमा २०८ सांसद देखिए । कांग्रेसका ६३ जना सांसद मध्ये ६० जना विपक्षमा देखिए । बाँकी तीन जना भने उपस्थित नै भएनन् । नयाँ शक्तिका नेता एवं स्वतन्त्र सांसद बाबुराम भट्टराई र नेमकिपामा नेता एवं स्वतन्त्र सांसद प्रेम सुवाल पनि उपस्थित भएनन् । थुनामा रहेकाले राजपाका सांसद रेशम चौधरीले मत मत दिन् पाएनन् भने सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि पक्ष/विपक्षमा खुलेनन् । २७५ मध्ये २६८ जना सांसदमात्रै प्रक्रियामा सहभागी भए । ओलीले कुल सांसदको ७६ प्रतिशत र उपस्थिति सांसदको ७८ प्रतिशत समर्थन पाएका छन् । अव प्रधानमन्त्री ओलीलाई कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने मात्र होइन, संविधान नै संशोधन गरेर समेत काम गर्ने अवसर मिलेको छ । दलीय सहमति जुटाउँदै समय गयो भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको जस्तो बाध्यता ओलीलाई छैन् । तर, ओलीसँग अवसरसँगै चुनौती पनि छन् ।
चुनौती नं. १
ओलीसँग जनताको अपेक्षा धेरै छ । नियमित कामले मात्रै त्यो अपेक्षा पुरा हुन सक्दैन । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा ओलीसँग जनताको ठूलो अपेक्षा छ । देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा यी काम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
चुनौती नं. २
राष्ट्रियताको विषयमा स्पष्ट अडान लिएका कारण ओलीप्रति आम जनताको समर्थन रह्यो । विगतका तर्कमा अडिएर छिमेकी दुई देशबीच सन्तुलित सम्बन्ध राख्नु र उनीहरूको विकासलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सक्नु अर्को चुनौती छ ।
चुनौती नं. ३
विगतमा कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका राजपा र फोरम अहिले ओलीका सहयात्री बनेका छन् । सवैलाई समेट्नु ओलीको सफलता हो । तर, निर्वाचनमा छुट्टाछुट्टै गठबन्धन गरेर संसदमा आएका वाम गठबन्धन र मधेसी गठबन्धनको घोषणपत्रमा केही भिन्नता छन् । यो कि त्यो भन्ने विवाद उत्पन्न भयो भने ओलीलाई काम गर्न असहज हुन सक्छ ।
चुनौती नं. ४
सत्तामा खारिएको दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । सरकारमा उसको उपस्थिति नभएपनि राज्यसत्तामा भने ठूलो प्रभाव देखिन्छ । कर्मचारीले सूचना चुहाउने र कांग्रेसले निर्णय पूर्व नै संसद र सडक तताउने अवस्था आउन सक्छ । पाँच वर्षपछिको सत्ता हेरेको कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सहज छैन् ।
चुनौती नं. ५
आफ्नै पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउनु पर्ने चुनौती पनि ओलीसामु छ । आफू पक्षलाई मात्रै स्थान दिने गरेको, फरक मत राखेकै आधारमा अवसरबाट बञ्चित गराउने गरेको आरोप ओलीमाथि छ । यस्ता आरोपको व्यवहारबाटै खण्डन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती पनि ओलीसामु छ ।